HF29016 isi awọ mara mma floral ụkpụrụ bedspread, China HF29016 isi awọ embossed Ifuru ụkpụrụ bedspread Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home akwa Co., Ltd
LAVISH DESIGN & COLORS –100% microfiber maka ịdị nro na-adịte aka na ezumike zuru oke site na ịfụfụ na mgbochi na-adị mma karịa owu - Hypoallergenic coverlet ga-eme ka ahụ gị dị ọhụrụ. O nwere ihe nlere anya, nke a na-ekpo ọkụ na monochromatic mgbe ọ na-eweta mmewere nke nkọwa na ọkaibe n'ime ụlọ ahụ .. Ihe ndina ahụ bụ ìhè zuru oke iji mee ka ihu igwe dị ọkụ, ma na-ejidekwa ya n'abalị oyi.
Nhọrọ MICROFIBER NWA MGBE
Mara Mma Uche Akuko
Oge niile ana-akasi obi na imewe
Ìhè & adụ
Ugwu kacha elu na oru ndi ahia. Ngwaahịa anyị nwere ezigbo ogo dị elu yana 100% afọ ojuju ndị ahịa. Anyị bedspread bụ a zuru okè oke aka gị bed gị si ọtọ ka fabulous.
Okomoko Waye Point polyester ihe mkpuchi akwa maka ime akwa